डम्मर बम पहिलो चरणको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन ३२ जिल्लामा सफलता पुर्वक सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै वाँकी रहेका ४५ जिल्लाको दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर २१ गते तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो ऐतिहासिक निर्वाचन भई रहेको छ । नेपालको आध
कल्पना खरेल / हरेक वर्ष विजयादशमीले मेरो मनमस्तिष्क पलपल मेरो देशमा पुर्‍याउँछ । कल्पनामा हराउँछु, रमाउँछु । तर, कल्पनाबाट बाहिर निस्कँदा भक्कानिन्छु । सात समुद्र पारिबाट झलझली देख्छु मेरो प्यारो देश, अनि मेरो प्यारो गाउँ । ओहो ! दशैँको आगमन । वर्षायामले विश्राम लिएर शरद् ऋतुले स्वागत गरिरहेका
हरेक जीव तथा मानव शरीर संचालन कर्ता संग सिधा सम्पर्कमा रही सम्पूर्ण तत्व विषय भावका खवर तथा एक अर्कामा सुचित गर्ने मध्यान मन हो मानव अंगका चाहना इच्छ्या परिपूर्ति गर्ने गराउने पनि मन नै हो जसले नकारात्मक वा सकारात्मक गुण भावनालाई सर्वोच्च विन्दुमा अनुभव महसुस गर्ने गराउने कार्यमा मद्दत समेत गर्दछ
दिनेश न्यौपाने म एक बाहुन परिवारमा जन्मियको छोरा हुँ । अछामको बिकट पहाडी जिल्ला अछामको बाटुलासैनमा मेरो जन्म भएको थियो । भौगोलिक बिकट्ताले पछि परेको मेरो गाउमा कमि केवल बिकासका लागी मात्रै हेरेर बसेको छैन कमिहरु त मेरो जन्म भुमिलाई गाडि, सडक, बिद्युत, स्वास्थ्य यस्ता आदि बिकासका नजरमा केहि पछि त छ
साध्यबहादुर भण्डारी मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दा हामीले २०६४ सालमा फर्किनुपर्छ । २०६४ सालको वैशाख २८ गते नेपालको मधेसलाई लिएर भारतको पटनामा एउटा वैठक बस्यो । भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पदाधिकारीको विशेष उपस्थिति रहेको वैठकमा थिए, रामराजाप्रसाद सिंह, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो । मध
प्रिय मोदी जी, नमस्कार । मलाई थाहा छ, यो पत्र तपाईंसमक्ष पुर्‍याइनेछैन । तपाईंको परम्परागत कर्मचारीतन्त्रलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ कि यस्ता कुरा मात्र तपाईंको जानकारीमा ल्याउनुपर्छ जुन तपाईंलाई मनपर्छ । जुन तपाईंलाई मन नपर्ने सम्भावना रहन्छ, तपाईंको ब्यूरोक्रेसीले त्यसलाई सेभेन रेस कोर्स पुग्नुअ
राष्ट्रिय सरकार र देउवा
कैलालीजस्तो आन्दोलन सबै प्रदेशमा उठ्नेछन्
गिरीराजमणि पोखरेल नेपालको नयाँ संविधानको परिमार्जित विधयेकमाथि बोल्न उभिरहँदा मभित्र मिश्रति भावहरु छन् । एकातिर खुसी पनि र अर्कोतिर चिन्ता पनि छ । खुसी यस मानेमा कि प्रक्रियागतरुपमा भन्नु पर्दा हामी संविधान निर्माणको धरै निकट पुगेका छौं । आन्तरिक वा वाहृय कारणले मुलुकमा ठूलै उथल-पुथल भएन वा सत्ता
महन्थ, उपेन्द्र र राजेन्द्रलाई ‘पुसकी रात’ पढ्न सुझाव / गल्ती कांग्रेस एमालेको, सजायँ प्रचण्डलाई किन ?
गोपाल किराती बिहारी समाजमा एउटा घर थियो । जुन घरमा युवा जोडी श्रीमान-श्रीमतीको परिवार थियो । हिउँदे बाली गहुँ लगाएपछि पुसको महिना त्यो हेर्न लायकको हुन्थ्यो । विशाल मैदानका कारण बारबेर गर्न घोचाको उपलब्धता सम्भव थिएन । तारबार लगाउन उनीहरुसित पुँजी हुँदैनथ्यो । त्यसैले गाईवस्तुबाट गहुँ
रमेश ढुंगेल print अहिले छुट्टै प्रदेश माग गरेर आन्दोलनमा ओर्लिएको कर्णाली कुनै बेला ठूलो साम्राज्यको राजधानी थियो। खस साम्राज्यको राजधानी सिंजा उपत्यकामा थियो। जुन अहिले जुम्लामा पर्छ। कर्णाली स्वायत्त प्रदेश नै चाहिने भनेर माग उठेका छन्। आन्दोलन भएको छ। त्यो आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन राज्यको प्रशा